China 80gsm Sticky/Tacky Sublimation yePhepha lokwenziwa kunye neFactory | Chenhao
Iphepha le-80gsm eliNncamathelayo / elineTacky sublimation
-Ukuncamathela okuphezulu kwilaphu eliphezulu elithambileyo, akukho ghosting
-Imifanekiso emihle yoshicilelo
-Yenza iphepha linamathele kwi-textile ngexesha lokudluliselwa komfanekiso.
Ixabiso le-80gsm eliNncamathelayo/Iphepha le-Tacky Sublimation
Iphepha le-Tacky Sublimation liphepha elincangathi kakhulu elenzelwe amalaphu alastiki aphezulu. Akukho ntshukumo phakathi kwephepha kunye nelaphu ngexesha lokudluliselwa, ke iziphumo zodluliselo zibukhali kakhulu ngaphandle kokuphuma kwegazi kwemibala.
Iphepha le-80gsm Sticky / Tacky Sublimation lenzelwe ukubambelela kwimpahla yezemidlalo kunye namalaphu asebenzayo, kunye nezinye iindawo ezithambileyo ezithanda ukushwabana kunye nokuhamba ngexesha lokuhanjiswa kwemifanekiso. inoqoqosho ngakumbi kunephepha elincangathi elincangathi kakhulu le-inki ephakathi ukuya kwephezulu, naziphi na iimfuno nceda uqhagamshelane neentengiso zethu.
Ubungakanani obulungiselelweyo buyafumaneka.
Ukuncamathela okuphezulu kwelaphu elithambileyo eliphezulu, akukho siporho
Umfanekiso obukhali ngaphandle kopha kwemibala.
Isivuno esiphezulu sokudluliselwa
Yenza iphepha linamathele kwi-textile ngexesha lenkqubo yokudlulisa
Ukutshintshela kuzo zonke iintlobo zamalaphu epolyester.
Ingakumbi eyenzelwe amalaphu eelastiki aphezulu, aphelise ukuphefumla.
Umshicileli wefomati enkulu, efana noEpson, Mimaki, Roland, Mutoh, DGI, Regianni, njl.
Siye saba ngumvelisi wokugquma wephepha le-sublimation elinamava emveliso yeminyaka elishumi, ngoku sinemigca emi-5 yokwambathisa enesantya esiphezulu kunye neeseti ezingama-20 zokubuyisela umva ngokuzenzekelayo kunye noomatshini bokukrolwa kwimveliso yemihla ngemihla. Sivelisa iphepha elahlukileyo le-sublimation elinobunzima obusuka kwi-35gsm ukuya kwi-140gsm, ubukhulu be-roll ububanzi ukuya kuthi ga kwi-3.2m, ubude be-jumbo roll ukuya kuthi ga kwi-10,000m, ubungakanani obulungiselelweyo buyafumaneka. Sinikezela ngabathengi ngepakethi yokuthumela ngaphandle ekumgangatho ophezulu, kubandakanya iibhokisi eziqhelekileyo, iipallets zeqaulity kunye namatyala amakhulu omthi, njl.
Sikwanayo neseti epheleleyo yovavanyo lwezixhobo zokuhlola ukuqinisekisa umgangatho ukusuka kwiphepha elisisiseko ukuya kwiphepha lokugqibela lokudlulisa i-sublimation. Umbono wethu kukubonelela abathengi kwihlabathi liphela ngelona xabiso lihle le-sublimation yephepha. Izibonelelo zethu zikumgangatho ophezulu wokuhambelana, umhla wokuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nenkonzo yesiko.Iisampulu zasimahla zikwisicelo sakho, nceda uzive ukhululekile ukwenza uMbuzo!
1.Indawo yokugcinwa kwephepha le-sublimation : khusela izinto ezivela kwilanga elithe ngqo. Gcina izinto eziphathekayo kuphela kwipakethe yokuqala phantsi kweemeko zemozulu eziqhelekileyo (23 ° C, 50% RH). Kucetyiswa ukulungelelanisa izinto kwimozulu yangaphakathi ubuncinane kwiiyure ezingama-24 ngaphambi kokusetyenziswa.
2. Ubomi beshelufa yephepha le-sublimtion : Iphepha le-tacky sublimation licetyiselwe iinyanga ezisi-8.
3.Ungayivezi kwi-heater ixesha elide ngaphambi kokudluliselwa, kunokubangela ukuhla kwe-viscosity. Ixolo lipholile emva kokudluliselwa. Ubushushu obuhlukeneyo kunye nokufuma kuya kutshintsha i-viscosity, nceda ukhethe ubushushu obufanelekileyo ngokusekelwe kwiprouction yakho.
Ngaphambili: 120gsm Super Dry Sublimation Paper
Okulandelayo: Iphepha le-90gsm eliNncamathelayo/eliNcamanga
Iphepha le-100gsm Tacky High Sticky Sublimation
Iphepha elincangathi le-Tacky Sublimation lempahla yezemidlalo
Iphepha leTacky Dye Sublimation
Iphepha le-Tacky Heat Transfer Sublimation ye-Soccer Jersey
Iphepha le-Tacky Sticky Sublimation
Iphepha leTacky Sublimation
Iphepha le-Tacky Sublimation 13 X 19
Iphepha leTacky Sublimation leZinxibo zeMidlalo
Iphepha leTackysticky Sublimation
I-Wholesale Tacky Sublimation Paper 80gsm
Iphepha le-140gsm Hi-Weight Sublimation
Umgangatho ophezulu wefilimu ye-DTF 30cm/60cm ye-DTF yokuprinta...